Akanakisa Tafura Mugadziri uye Fekitori | Medo
KuMEDO, matafura anogara ari nyeredzi inopenya. Iyo ndiyo yakanakisa shamwari yeMEDO masofa. Vatengi vese vanoda imwe sezvo ichibatsira uye ichidhura. Iwo matafura anowedzera imwe nzvimbo yeako. Izvo zvinounzawo pfungwa yemafashoni pasofa rako. Zvinogona zvakare kuve izvo zvakakwana zvinhu zvekusimudzira kana chipo mumwaka wekutengesa.
Tafura ndiyo yekutanga kuratidzwa kwemidziyo mumba. tafura dzinogona kuwedzerwa kune chero nzvimbo mumba uye dzinochinja zvisingaperi.
Iwo matafura anosanganisa iwo akajeka dhizaini uye zvinoshandiswa. Nekushandisa muchina wepamberi uye zvemhando yepamusoro zvinhu, unogona kuve nechokwadi nezve mhando yematafura.
Yemazuva Ano Round Corner Marble Pamusoro Kofi Tafura
Inotora iyo yemarble yeItaly sepa tafura uye simbi furemu yakaputirwa neprimiyamu yechigaro cheganda.
Tafura yekofi yeMarble inozivikanwa pamusika nekuda kwekugadzirwa kwayo kwechisikigo, kupisa-kupisa, uye kushanda kusingaite.
Izvo zvakare zvine hunyanzvi mukugadzirwa kwemukati, sarudzo yakasarudzika yenzvimbo dzakasiyana.
Kurarama Kamuri Center Tafura Oval Stone Center Tafura
Kofi matafura anotora yakasimba simbi makumbo dhizaini, iyo inogona kushanda zvakanaka kutakura iyo yakawanda-giravhiti kubva kunze kwekunze.
Iyo yepamusoro yedombo yepamusoro ndeye yakanakisa nyowani zvinhu zvine hukuru hukuru. Pamupendero wepamusoro yakanyatso simbi simbi inoputira uye inodzivirira dombo.
Yemazuva ano eItaly Luxury Saddle Leather Center Tafura
Yakadzoserwa pamusoro, inowanikwa mune anotevera anopedzisa marble, aine kabhoni gumbo rakavhurika-pore lacquer kupera. Mune vhezheni ine chigaro cheganda mukati mayo, chimiro chese chepamusoro chiri muchigaro saka hapana furemu.Saka rinotaridzika kwazvo mhando yepamusoro yepamusoro petafura yepakati
Minimalist Center Tafura Ine Chigaro Chechigaro
Underpanel muzinga reuchi MDF ine chiutsi chehuni yehuni veneer uye yakaputirwa neyakaunzwa chigaro cheganda.
Makumbo Mune simbi, yegoridhe-nickel kupera, uye inodzivirira glides.
Luxury Minimalist Marble Kudya Tafura
Tafura yetafura yakagadzirwa nesimbi uye yakaputirwa neganda remukati pechigaro chakasanganiswa negumbo resimbi isina tsvina. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvepa desktop zviripo: hutsi hunokatyamadza, kupenya kwemavara isingaite mvura yekumesa pamusoro pekurapa. Iko kuchenjera kwekugadzirwa uye kunoshanda dhizaini kunogadzira yakashambidzika dhizaini.
Minimalist Rectangular Kudya Tafura
Iine mhando yemarble kana huni yakasimba yakashongedzwa rectangular yakakomberedzwa tafura yepamusoro, tafura yekudyira inogona kunzi ndiyo huru protagonist munzvimbo yepamba, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekufananidza nemidziyo yakasiyana.
Yemazuva Ano Luxury Dining Tafura
Iyo inozivikanwa nesimbi-yakapfeka goridhe uye girazi resimbi nhema. Tafura yematombo inofuridzirwa nedenga rine nyeredzi muhusiku hwezhizha: inoumbwa neyakagadzirwa yakasarudzika-yakasimba uye yakawanda mhando dzemhando yepamusoro dzemabhura, ichiumba musanganiswa wakasarudzika wezvinhu zvakakura uye zvidiki-zvidiki zvemarble, izvo zvinogona kuratidza muraraungu. -akaita mavara.
Minimalist Kudya Kamuri Tafura
Iine marble kana huni yakasimba yakashongedzwa rectangular yakakomberedzwa tafura yepamusoro, ichishandisa yepamusoro-soro ibwe uye huni pamusoro pezvinhu, tafura yekudyira inogona kunzi ndiyo huru protagonist munzvimbo yemba, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekufananidza nefenicha dzakasiyana.
MEDO Minimalism Chimiro Fenicha Kofi Tafura Mugadziri
Isu tanga tichigadzira yemhando yepamusoro matafura ekofi uye takagadzira inoshanda QC system yekutarisa pane yega yega fenicha yedu. Ruzivo rwedu uye maitiro anotibvumidza kupa mhando mune-masheya mamodheru uye yakasarudzika kofi tafura mhinduro pamitengo inodhura.
Iwe unogona kugutsa akawanda dhizaini dhizaini nemaitiro edu anogara achiwedzera ematafura ekofi akawanda.
Marble Side Matafura anouya mune echichena machena machena pamusoro. Iyo inosanganisa iyo element yemasikirwo emarble uye American dota solid huni zvakanaka. Iyo ndeimwe yeanopisa-kutengesa marble epamusoro kofi matafura. Vatengi vedu vanowanzoishandisa sesofa padivi petafura inochinjika kune akawanda akasiyana magadzirirwo esofa.
Iwo madiki mataundi ekofi anotenderera ane dhizaini yakasarudzika. Inomira pamusika wekugadzirwa kwechimiro chayo uye mubatanidzwa wezvakasiyana zvinhu uye mavara. inounza kubatana kune yako nzvimbo.
Iwo matafura epadivi, idiki tafura yemakona edivi inozvisiyanisa pachayo neayo endarama uye makumbo. Tafura yacho iri mutema negoridhe yakavhenganiswa dombo rakavezwa, pamwe negumbo resimbi yendarama, dhizaini yacho inopa mamiriro ezvinhu emazuva ano. Iyo inochinjika mune akawanda masitaera
Iwo matafura ekofi emazuva ano.
Chikamu chikuru chekofi tafura iri muVeneered MDF chikamu chinowedzera mamwe maitiro. Iyo base iri mune yakasimba kabhoni simbi saka inogona kuve yakasimba kwazvo uye panguva imwechete yakatsetseka.
MEDO Minimalism Chitaera Kudya Matafura
Iwe uri kuda here yetsika yekudyira matafura? Ngativei sosi yako yemhando yepamusoro matafura anokodzera yako poindi yemutengo. Nekuzvipira mukugadzira yakasimba uye inoyevedza tsika yekudyira matafura, timu yedu yekugadzira inogara ichigadzirisa zvigadzirwa zvedu kuti zvienderane nezvinodiwa zvemusika zvazvino.
Mutsara wedu wemabhera ekudyira emarble, matafura ekudyira akawedzeredzwa, uye matafura ekudyira akakomberedza ndiyo tsika yedu yekudyira matafura.
Iwo matafura ekudyira ane zvigaro zvevanhu 6 kusvika ku8. Iyo yakasarudzika minimalist dhizaini yekudyira tafura ine yakasviba yepamusoro uye hwaro. Tafura yepamusoro petafura inogona kunge iri yemarble kana MDF ine oak veneer kupera. Ipo makumbo akapenderedzwa nendarira yakaputirwa neshinda yeganda.
Tinopa hukuru hutatu pakudiwa kwenzvimbo dzakasiyana. Tsika dzesarudzo dzinowanikwawo kune akawanda maodha.
Tafura yekudyira yekutenderera inouya nemakumbo esimbi uye maviri-akaturikidzana matanda pamusoro. Masayizi, zvishandiso uye mavara anogona kuve akagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana.
Yakakwira-Yemhando Dining Tafura
Dhizaini yacho yakapfava uye inoyevedza. Inozivikanwa seyakanyanya minimalist dhizaini inoratidza mararamiro matsva.
Chidimbu hombe chesimbi chakasimba uye chakatetepa chakagara pamakumbo mana akasimba asi akasimba simbi makumbo. Pasina chero chimwe chishongo, chinomira musango rematafura ekudyira pamusika. Iyo inobatsira zvakakwana kukwana mune akawanda akasiyana masitayera emukati.
Yemazuva Ano Furniture Center Tafura
Center Tafura 1200 * 800 * 325mm 600 * 600 * 445 mm
Mashoko Chakagadzirwa machena, Dark Grey Chigaro Leather
Kudya Kudya Simbi Gumbo + Chigaro Cheganda
Center Tafura Ø1200 * 390mm Ø800 * 460mm
Mashoko Ndarama isina simbi, pizza grey marble
Kudya Kudya Simbi Gumbo
Center Tafura 1000 * 1000 * 350mm 760 * 760 * 450 mm
Mashoko Premium Chigaro Cheganda, Nhema Dema, Oak
Center Tafura 1300 * 780 * 400mm
Mashoko Svuta ukanyatsotarisisa, 304 Stainless simbi titanium yakafukidzwa
Yemazuva Ano Fenicha Kudya Tafura
Kudya tafura 30130 * 750 mm Ø150 * 750mm
Mashoko Yakatengwa Walnut / Natural Marble
Kudya tafura 1630 * 800 * 760 mm
Kudya tafura 1200 * 760 mm
Mashoko Simbi, Premium Chigaro Cheganda, Inotorwa Walnunt Veneer
Kudya tafura 1790 * 1100 * 745mm
Mashoko White Marble Kumusoro